Itita Dhiigaa - Wikipedia
Coagulation akkatta xaxama dhigni walitti qabame jabba ta'u dha. Kuni immo kutta hemostasis (walit-anne jiggu dhigaa) kessa isaa barbachisaa dha, kunis yerro girgidaan tuboon dhigaa midhame jirru yoo walitti qabama platelet fi fibrin ofii kessa qabun dhiga'un yoo dhabatte, tuboo midhame qajjelchu jalqabu dha. Disorderiin coagulationiin kuniin midhama dhiga'u fi/yokan walit-qabamu dhiga fi embolismii fiddu danda'a.
Biology kessatti coagulationiin bayye eggama; hosiftotta hunda kessatti, coagulationiin kessatti lachuu: cellular (platelet) fi protein (coagulation factor) ofii kessa qaba. Akkataan coagulation kuni nama irratti waan bayye qo'atamuf nama kessatiis akkanuma bekkama.
Coagulationiin kan jalqabu yerro bayye ergaa nami tuboo dhigaa irratti midhama argatte midhami kuni immo endothelium (tartibaa tuboo) midhee dhufaa. Osoo hin turiin Plateletonni dhigii jiggu akka dhabatu hemostatic plug ummu kunis primary hemostasis (hemostasis duraa) jedhame bekkama. Yeroo hunda itti anne secondary hemostasis (hemostasis lammaffan) bakka fudhata, kunis yeroo proteiniin blood plasma kessatti argamu kan coagulation factor jedhamu yoo dafee dhaqabuf fibrin umme akka plugiin plateletiin umamee akka jabatuu godha.
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Itita_Dhiigaa&oldid=25398"
Last edited on 25 Adooleessa 2014, at 09:09
This page was last edited on 25 Adooleessa 2014, at 09:09.